izifundo Archives - Mytika Speak
Ikhaya / izifundo
Umaki - izifundo
Ingabe abantu bangaphambanisa izifundo omunye komunye?
Ngezinye izikhathi, umuntu angabona omunye efunda isifundo. Ngenhloso enhle, bangazama ukubasiza futhi babaxazululele inkinga. Ngu ...
Izifundo empilweni ukuzivocavoca komphefumulo wakho. Lapho isifundo sivela, uvame ukufakwa esimweni esingakhululekile. Lokhu kudinga ukuthi umphefumulo wakho ungene ...
Kungani imibuzo ikhona?
Noma nini lapho kubuzwa umbuzo, impendulo kufanele inikezwe ngendlela yezifundo. Izifundo ngokwenyama zinikeza izimpendulo. Kwezikamoya, imibuzo yenza ...
Ingabe ukuphila kuyisifundo esikhulu?
Impilo ayisona isifundo esikhulu kodwa yakhiwe ngezifundo. Lapho wenza izifundo, abantu bayashesha ngokomzimba. Lokhu kubagcina bephila ngokomzimba ku ...
Zingaki izikhiye ezikhona?
Kunenombolo engapheli yokhiye. Njalo lapho uqeda isifundo ngempumelelo, uthola ukhiye omusha. Uma usutholakele, lowo khiye uhlala nawe kuze kube phakade ...
U-Ego unguthisha wezifundo endaweni ebonakalayo. Uma kubuzwa umbuzo, u-Ego wakha impendulo ngokomzimba njengendlela yokunikeza impendulo ...
Ukuzimela kweqiniso nokulinganisela komlingiswa kungakwenza kanjani?
Ubunjalo bakho beqiniso kanye nomlingiswa wakho angalinganisela lapho imizwa yakho kanye nengqondo yakho kuvunywa. Ukuqhamuka endaweni yomoya, kunzima ku-True Self ...
Cha. Abantu bakhetha ukuzifaka ezivivinyweni ezisuselwa esifundweni ukuze bavivinye ukholo lwabo. Lokhu kungabonakala njengokuhlupheka. Kubalulekile ukuqaphela ...